२५ वाणिज्य बैङ्कको शेयर मूल्य सस्तियो - DainikeeNews::Fastest news portal nepal, news from nepal
बुधबार, बैशाख १२, २०७५ |
२५ वाणिज्य बैङ्कको शेयर मूल्य सस्तियो
काठमाडौं, फागुन २७ । दोस्रो शेयर बजारमा कारोबार भएका २५ वाणिज्य बैङ्कको शेयर मूल्य १ महीनाको तुलनामा घटेको छ । लामो समयदेखि घटिरहेको बजारले गर्दा यी बैङ्कको मूल्य घट्न पुगेको हो । जसमध्ये स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपाल बैङ्कको शेयर मूल्य १ महीनाको अन्तरमा रू. १ सय ६ ले घटेको छ । माघ २३ गते भएको शेयर कारोबारमा यस बैङ्कको शेयर मूल्य रू. १ हजार १ सयमा कारोबार भएको थियो भने फागुन २३ गते रू. ८ सय ९५ मा शेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी एभरेष्ट बैङ्कको शेयर मूल्य १ महीनामा रू. ७७ ले घटेको छ । माघ २३ गते रू. ८ सय ५० मा कारोबार भएको शेयर फागुन २३ गते रू. ७ सय ७३ मा कारोबार भएको छ ।
बजार घटेसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर मूल्य घट्दै गएको छ । गत मङ्गलवार र बुधवार भने शेयर बजार सामान्य रूपमा बढेको थियो । कारोबार भएका २५ वाणिज्य बैङ्कमा सबैभन्दा थोरै मूल्यमा कारोबार हुने बैङ्कमा जनता बैङ्क लिमिटेड रहेको छ । बुधवार भएको शेयर कारोबारमा यस बैङ्कको रू. १ सय ६५ मा शेयर कारोबार भएको छ ।
सिभिल बैङ्क लिमिटेडको रू. १ सय ५६, कुमारी बैङ्कको २ सय ५९ मा कारोबार भएको छ । यस बैङ्कले पूँजी वृद्धि अभियानको लागि १० बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । हकप्रद वितरणपछि बैङ्कको पूँजी अपुग हुने भएकाले बोनससमेत दिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । वाणिज्य बैङ्कको रू. २ सयको हाराहारीमा कारोबार हुने बैङ्कमा सनराइज बैङ्क, प्राइम कमर्शियल बैङ्क, प्रभु बैङ्क, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, माछापुच्छ«े बैङ्क, सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनल लिमिटेड रहेका छन् । यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा छ ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन २७, २०७४ /
३ लाख ६२ हजार १९० कित्ता शेयरमा आवेदन दिने बुधबार अन्तिम दिन
नेपाल सेवा लघुवित्तले आईपीओ निष्काशन आजदेखि
कति दिने भयो सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले बोनस ?
मङ्लबार, बैशाख ११, २०७५
यी कम्पनीका हकप्रद शेयर बजारमा छन् (नामावली सहित)
आइपिएलः बुधबार रोयल च्यालेन्जर्स ब्याङ्ग्लोर र चेन्नई सुपर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा
५ अर्ब ३१ करोड रकम दुरुपयोग !
एसपी खनाल सुन काण्डमा पक्राउ ।
बुधबार पनि कांग्रेस बैठक बस्ने
गोरखा भुकम्पको तीन वर्ष पुरा
कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको केन्द्र सर्यो (सूचिसहित)
यी हुन हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी (सूचिसहित)
शुक्रबार नेप्सेमा ११ कम्पनीको सेयर सुचिकृत
विहीबार ११ कम्पनीको शेयर सूचिकृत
रु. १०० मै ३० लाख १९ हजार कित्ता शेयर आजबाट निष्काशन
शिक्षा एकाइ प्रमुख नेपालविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता
यी हुन प्रहरी जवानबाट हवल्दारमा बढुवा हुने ? (नामावलीसहित)
छोराछोरी सामुदायिकमै पढाउनुस्ः शिक्षामन्त्री